खुशीको खबर : पहिलो कोरोना सं’क्रमित नर्स सहित १०६ जना कोरोनालाई जितेर फर्किए !! – Butwal Sandesh
खुशीको खबर : पहिलो कोरोना सं’क्रमित नर्स सहित १०६ जना कोरोनालाई जितेर फर्किए !!
नेपालमा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित नर्स आज कपिलवस्तु अस्पतालबाट पूर्ण रुपमा ठिक भएर डिस्चार्ज हुनुभएको छ । कपिलवस्तु अस्पतालमा कार्यरत कोरोना संक्रमित नर्सको दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि आज बिहान डिस्चार्ज हुनुभएको हो । पहिलो स्वाब परीक्षण गर्दा वैशाखा ३० गते उहाँलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
उहाँको दोस्रो र तेस्रो रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ । उहाँले आफू संक्रमणमुक्त भएको जानकारी दिदै अस्पतालमा बस्दा स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिनुहुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभयो । हेल्थपाटीसँग कुरा गर्दै उहाँले आफू पूर्ण स्वस्थ भएको बताउनुभयो । उहाँले डिस्चार्ज भएर पनि घरमा गएर सात दिन सेल्फ क्वारेनटाइनमा बस्ने बताउनुभयो ।
उहाँले १४ दिनसम्म अस्पताल बस्दा आफ्नो कोरोना भन्दा पनि समाजसंग लड्न गाह्रो हुने अनुभव सुनाउनुभयो । कोरोनासंग लड्न आत्मबल चाहिने उहाँको भनाई छ ।यस्तै करोना भाइरस (कोभिड – १९)का पछिल्ला दुईवटा रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि नारायणी अस्पतालमा उपचार गराइरहेका १८ जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ ।
त्यस्तै, बाँकेमा कोरोना स’ङ्क्रमण बढ्दै गएपछि परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलनको दायरा बढाइएको छ ।कोरोना सङ्क्रमण अतिप्रभावित क्षेत्र नरैनापुर सँगसँगै अन्य छिमेकी गाउँपालिकामा पनि कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका अधिकृत एवं कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताएका छन् । उनका अनुसार आइतबार जिल्लाका चार स्थानबाट १७१ जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको छ ।
डुडुवा, राप्तीसोनारी, बैजनाथ र जानकी गाउँपालिकाबाट स्वाब सङ्कलन गरिएको हो । बाँकेबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ पठाइएको १७५ जनासहित ३४६ जनाको स्वाबको परीक्षण नतिजा आउन बाँकी रहेको फोकल पर्सन श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । बाँकेमा हालसम्म कोरोना परीक्षणका लागि दुई हजार ४ ४० जनाको थ्रोट स्वाब सङ्कलन गरिएको छ ।
सङ्कलित स्वाबमध्ये एक हजार ९५२ जनाको परीक्षण नतिजा नेगेटिभ तथा १४२ जनाको परीक्षण नतिजा पोजेटिभ देखिएको छ । बाँकेमा हालसम्म एक हजार १४२ जनाको आरडिटी गरिएको छ । आइतबार मात्रै ४४ जनाको आरडिटी गरिएको र नतिजा नेगेटिभ आएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
बाँकेमा एक जनाको ज्या न जाने गरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका तथा नरैनापुर, राप्तीसोनारी र खजुरा गाउँपालिकामा स’ङ्क्रमण देखिएको छ । स’ङ्क्रमणबाट एक जनाको मृ त्यु भइसकेको छ भने उपमहानगरपालिकाका २१ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।